Isi mmalite nke T'ai Chi - balm maka mkpụrụ obi na ahụ
Omume maka ahụ na uche
Ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu ụwa achọpụtawo nkà ihe nkiri oge ochie T'ai Chi ma mee ya iji mee ka uche ha dị n'otu, na-edozi ọrịa anụ ahụ, dị ka omenala ọdịnala ma ọ bụ ntụgharị uche.
Dịka ọtụtụ omume Eastern Eastern, a na-aghọta nke a dị ka onye bara uru bara uru nakwa na ọ bụ ihe ọzọ dịka ọgwụgwọ. Ma olee kpọmkwem T'ai Chi, ebee ka esi bịa, olee otú e si eme ya na ihe ọ na-eme?
Mmalite nke T'ai Chi nwere ike na 18 na-apụ apụ. Century. N'oge ahụ, ezinụlọ ọ bụla dị mkpa na China "nwere" nkà nke aka ha, nke dị na nkà na nkà na ụzụ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, ma na nzuzo zoro ezo.
Ugbu a, a naghị eji T'ai Chi eme ihe dị ka ụzọ mbụ nke ọzụzụ maka swordplay, mana ugbu a isi nchegbu ya bụ nkwalite na ichebe ahụ ike.
A na-akpọ usoro zuru ezu ka ọ bụrụ ụdị. N'ebe a, onye ahụ na-ewere ọnọdụ dị iche iche dị iche iche mgbe ọ bụla ọzọ ma jikọta ya na mmegharị na-agagharị.
Ọnọdụ onye ọ bụla nwere - dị ka yoga - aha pụrụ iche, ụdị nwere ike ịme ngwa 140 ngwa ngwa. Ọ na - ewe oge iji tinye usoro dum, ma nke ahụ bụkwa akụkụ dị mkpa nke egwuregwu a.
Ụzọ bụ ihe mgbaru ọsọ, ma site n'ịtachi obi na nnọgidesi ike otu onye na-enweta nke ahụ. Anwansi anwansi nke T'ai Chi na-adi n'ime ngwa ngwa. A ka na-eme ka ndị agha na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa, mana na nsụgharị kpochapụwo, ike nkịtị dị jụụ.
Ntinye nke ụdị na-amalite site na njiri ziri ezi. Eziomume, na ikpere ghere oghere, anya ogologo na ogwe aka na-enweghị atụ, onye na-ezukọ onwe ya na mmụọ ma kwenye na ọ na-elekwasị uche n'ime izu ole na ole na-esote kpam kpam na nghọta anụ ahụ.
T'ai Chi - Lenin odida obodo / Pixabay
Mkpụrụ ahụ na-agagharị na nke ọma site na ahụ dum. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ mpaghara dị jụụ nke ụbọchị na ebe a na-adịghị anọchi anya iji mee mmemme ahụ.
Ma n'ehihie na ogige ahụ, na ime ụlọ ma ọ bụ n'ụtụtụ n'elu tebụl - ihe bụ isi, ihe nhụsianya na nsogbu na-adịghị mma dị anya.
N'ezie, ị nwere ike ịkụziri onwe gị otu ma ọ bụ karịa ụdị onwe gị na akwụkwọ, ọzụzụ nke onye nkụzi nwere ahụmahụ na-enye aka, ma karịsịa maka ndị na-amalite ịmara ihe. Tụkwasị na nke ahụ, ọnọdụ ọjọọ ọ bụla anaghị akụ ma ọlị; ị na-amụ ngwa ngwa, otú ọ na-adị "nri".
N'ihe eji eme ihe na T'ai Chi nwere ihe mgbochi na ọgwụgwọ na akụkụ ahụ dum. N'ozuzu, mgbe oge ụfọdụ nke mmega ahụ na-aga n'ihu, ịmalite ọrụ, ike ịmaliteghachi, echiche nhazi na mgbaze ka mma.
Mgbaze ọkụ na-agbapụ, mgbasa na ụra nke na-ehi ụra na-eme ka obi sie ike ma na-enwekwa obi iru ala n'oge na-adịghị anya. T'ai Chi, karịsịa ma a bịa n'ihe gbasara nkwonkwo na nrụgide nrụgide nke ahụ ike, nwere ike ịmepụta oke ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na ejiri nduzi kwesịrị ekwesị.
Ọ dabara na, ụdị njem a amaghị na ọ gaghị eru afọ, ọ ga-adịkwa mma, ọbụlagodi na ọ bụrụ na mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa na-adịghị ahụkarị na ndị ọrụ gọọmentị na-etinye aka na ndụ kwa ụbọchị. Ọtụtụ ndị China enweghị ike ịbụ ihe ọjọọ.
Sauna - ezumike maka ahụ na uche
Erotic colored peeji nke aka na ahu
Ndị okenye na-agba agba - Njikọta ozu